Waa kuwee 'hablaha xulka ah' ee hurdada u diiday Trump? - BBC News Somali
16 Luulyo 2019
Lahaanshaha sawirka Chip Somodevilla/Getty Images
Image caption Seddex ka mid ah hablahaasi, Alexandria Ocasio-Cortez, Ayanna Pressley iyo Rashida Tlaib
Farriin uu usbuuci hore madaxweyne Trump uu boggiisa tweetarka soo dhigay oo uu haween ka tirsan aqalka Koongaraska Mareykanka uu ku yiri 'dalalka ay ka yimaaddeen ha ku noqdaana' waxaa ka dhashay cambaareyn iyo dhaleeceyn aad u xooggan.
Haweenka ka tirsan aqalka Koongaraska Alexandria Ocasio-Cortez, Ayanna Pressley iyo Rashida Tlaib oo dhammaantood ah muwaaddiniin Mareykanka u dhashay waxay madaxweyne Trump ugu yereen Cunsuri.
Madaxweyne Trump inkasta oo uu haweenkaasi si gaar ah u carabbaabin haddana hadalka sida uu u dhigay iyo cidda uu u la jeeday waxaa laga fahmi karaa farriimahiisa.
Haddaba, waa kuwee hablaha xulka ah ee madaxweyne Trump hurdada u diiday?
Lahaanshaha sawirka Tom Williams/Getty Images
Image caption Ms Ocasio-Cortez iyo Ms Tlaib
Alexandria Ocasio-Cortez, oo magaceeda loo soo gaabiyo AOC, ayaa bishi June ee la soo dhaafay mowjad hor leh ka furtay xisbiga dimuqraadiga iyada oo xilligaasi difaacday aadna uga adkaatay hogaamiye siyaasadeed iyo aasaasihii joornaalka Joe Crowley.
Ms Ocasio-Cortez oo 29 jir ah waxay doorashadi xilliga dhexe ee bishi November si weyn uga guuleysatay musharraxa Anthony Pappas iyada oo noqotay gabadhi ugu da'da yareyd oo xubin ka noqoto aqalka koongreska.
Xildhibaannadda aqalka Koongareska waxay ku dhalatay xaafadda Bronx ee ka tirsan New York, waaliddiinteedana waxay asal ahaan ka soo jeedaan jasiiradda Puerto Rico.
Shahaadada koobaad waxay ka haysataa dhaqaalaha iyo xiriirka caalamiga ah iyada oo ka soo baxady jaamacadda Boston, waxayna ka soo shaqeysay arrimaha bulshada, wacyigelinta bulshada ka hor inta ay go'aansanin iney iisu soo taagto musharraxnimada aqalka koongareska.
Tani marki la soo doortay waxay la soo baxday dardar siyaasadeed oo cusub iyada baadigoob u gashay raadinta xuquuqaha siyaasadeed ay sheegtay iney maqan yihiin.
Ms Ocasio-Cortez si aan gabbasha waxay baraha bulshada si joogta ah u soo dhigeysay farriimo ay ku dhaleeceyneyso Xisbiga Jamhuuriga, waxayna inta badan aad u cambaareysaa siyaasadaha Xisbiga Jamhuuriga ee ku aaddan qoxootiga, saboolnimada iyo jinsiga.
Fikradaha ay baraha bulshada ay soo dhigto ee liddiga ku ah xisbiga jamhuuriga waxaa boggeeda tweetarka kala socda dad ka badan shan milyan oo qof.
Waxyaabaha ay sumcadda weyn ku heshayna waxaa ka mid ah siyasadda ku aaddan deegaanka iyo sidi arrimaha isbeddelka cimilada uu Mareykanka uu heshiis uga gaari lahaa si wasaqeysiga hawada hoos looga dhigo.
Ms Ocasio waxay si aad ah uga hadashaa dhaleeceyn joogta ah oo ay u soo jeediso madaxweyne Donald Trump.
Wareysi ay la yeelatay CBS News waxyar un kaddib marki loo dhaariyey xilka loo doortay, Ms Ocasio-Cortez waxay sheegtay "iney su'aal ka taagneyn" madaxweyne Trump inuu yahay cunsuri.
"Ereyada uu isticmaalo ... waxay yihiin kuwa sarreynta midabka caddaanka ka tarjumaya, wuxuuna marar badan uu isticmaalaa hadallo cunsurinimo xambaarsan oo uu ka fiirsan" ayey tiri.
Lahaanshaha sawirka Stefani Reynolds/Getty Images
Image caption Ms Ilhaan Cumar
Ilhaan Cumar oo ah haweeneydii ugu horreysay oo Soomaali-Mareykan ah oo loo doorto inay xubin ka noqoto aqalka Koongareska ee waddanka Mareykanka waxaa la doortay bishi November ee kal hore.
Qoyska Ilhaan waxay Mareykanka ku tageen qoxootinimo iyaga oo ka yimid dalka Somaaliya, waxayna 1997-kii dageen Minneapolis iyaga oo ka soo cararay dagaallada sokeeye ee Soomaaliya ka qarxay waxayna sharciga Mareykanka qaadatay 2000.
Ilhaan oo 37-jir ah seddex carruur ahna dhashay waxay ka mid tahay labada hablood ee muslimka ah oo taariikhda dalka Mareykanka loo doortay aqalka Koongaraska Mareykanka.
Inta aqalka Koongaraska loo dooran, waxay ka soo shaqeysay golaha sharci dajinta Minnesota, waxayna ugu dambeynti noqotay gabadhi ugu horreysay oo Soomaali ah oo haysata dhalsha Mareykan oo si rasmi ah looga doorto xubinimada aqalka Koongaraska.
Trump oo amar ku bixiyay in la baaro garsoore faraxumayn lagu eedeeyay
Ms Omar waxay sumcadda ugu weyn ku kasbatay dhaleeceynta iyo hadallada kulkulul ee ay u soo jeediso madaxweyne Trump.
Waxyar un kaddub marki xilka loo doortay, waxay Ilhaan ballan qaadday iney geed dheer iyo geed gaabanba u fuuleyso sidi ay u beddeli lahayd sharciga xayirayo xijaabka ee 181 jirsaday iyada oo xijaabkeeda la gashay aqalka Koongaraska.
Balse Ms Omar waxay dhanka kale kala kulantay eedeymo la xiriiro Yuhuud Neceybka.
Waxaana marki dambe lagu qasbay iney raalli gelin ka bixiso gaar ahaan qoraallo Yuhuud neceyb ah oo ay boggeeda Tweetarka soo dhigtay Bishi Fabraayo, iyada oo dhaleecey u soo jeedisay ururka Aipac oo ay ku sheegtay iney siyaasadaha Israa'iil ay taageeraan.
"Yuhuud-neceybku waa mid jira waana u mahadcelinayaa xulafada iyo saaxibbada yuhuudda ee i baray taariikhda xanuunka badan ee ka soo horjeeda yuhuudda" waxay ka mid ahayd farriimaha ay boggeeda Tweetarka soo dhigtay.
Lahaanshaha sawirka NurPhoto/Getty Images
Image caption Ms Tlaib iyo Ms Omar
Si la mid ah gabdhaha hore Rashida Tlaib waxay guul taariikhda gashay ka soo hoysay doorashadi November.
Haweeneydan oo mataleyso xisbiga dimuqraadiga oo laga soo doorto Michigan waxay noqotay haweeneydi ugu horreysay oo Falstiin-Mareykanka ka soo jeedda oo ka mid noqoto aqalka Koongreska Mareykanka.
Ms Tlaib waxay ku dhalatay Detroit, Michigan aabbaheedna wuxuu ahaa Falastiini qoxootinimo ku tagay Mareykanka. Ayeydeed hooya waxay haddaba ku nooshahay Daanta Galbeed ee Falastiin.
Ms Tlaib marki xildhibaannimada Koongaraska loo dhaarinayey waxay soo xiratay dharka dhaqanka falastiin oo ay hooyadeed u sameeysay.
Ms Tlaib iyo Ms Omar waxay noqdeen haweenki ugu horreeyey oo Muslim ah oo loo doorto aqalka Koongaraska Mareykanaka.
Ms Tlaib oo ay wada dhasheen 14 carruur ah oo ay iyadu u weyn tahay waxay noqotay qofki ugu horreeyey oo dugsi sare, kulliyad iyo dugsiga sharcigaba ka soo baxay.
Marka ay shaqa billowday howlaheeda ugu horreeya waxay ka billaawday dhaleeceyn ay u soo jeedineyso madaxweyne Trump iyada oo hadalla aad u kulul kula hadleysay madaxweyne Trump hadalladiisana ku tilmaantay wax lagu qoslo.
Image caption Ms Ayanna Pressley
Ms Ayanna Pressley oo 45 jir ah waxay iyaduna noqotay gabadhi ugu horreysay oo Afrika-Mareykan ka soo jeedda oo ka mid noqoto aqalka Kongaraska Mareykanka iyada oo laga soo doorto Massachusetts.
Ms Ayanna waxay ku dhalatay Cincinnati waxayna ku soo barbaartay Ohilo, hooyadeedna waxay dhashay iyada oo keli ah.
Marki ay ka soo baxday jaamacadda Boston waxay lataliye u soo noqotay Joseph P Kennedy II oo aqalka Koongreska ka tirsanaa iyo Senetar John Kerry muddo 13 sana ah.
Ka qayb galka siyaasadda waxay soo billowday 2019-ka iyada oo xilligaasi ka mid noqotay golaha magaalada Boston, iyada oo xilligaasi noqotay haweeneydi ugu horreysay oo aan caddaan ahayn oo muddo 100 sana ah golahaasi loo doorto.
Tani iyo marka ay shaqa gashay bishi January, Ms Pressley waxay si weyn ugu ololeysaa xuquuqda ilma iska soo xaaqidda, iyo dadka danyarta ah ee ilmaha iska soo xaaqaya (iska soo ridaya) ay dowladda u diyaariso daweyn ka hortag ah.
Waxaa sida oo kale Ms Pressley aad loogu yaqaannaa iney ka hadasho dumarka loo geysto xadgudubyada jinsiga la xiriira sidi ay u heli lahaayeen taageero iyo dammaanad qaad noolaleed iyada oo boggeeda soo dhigtay "dadka xanuunkaasi xadgudubka dareema iney yihiin kuwa dadka kale uga dhow iney awood yeeshaan".
Image caption Madaxweyne Trump ayaa lagu dhaliilayaa cunsurinimo
Saddex qoraal oo uu Trump soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayuu haweenka ka tirsan Congress-ka ugu eedeeyay inay haweenkan "si joogto ah" u dhaliilaan isaga iyo waddanka Mareykankaba.
Ilhaan Cumar iyo ku xigeenka Trump oo ay ka dhex tolatay
Sidoo kale Ilhaan Cumar oo galinkii dambe ee maanta kusoo jawaabtay Twitter-keeda ayaa eedeyn culus u jeedisay madaxweynaha, iyadoo sheegtay "inay u dhaarteen sidii ay ula dagaallami lahaayeen madaxweynaha ugu musuqmaasuqa badan ee abid soo maray Mareykanka".